कांग्रेसका मान्छे हुँदा चिकित्सक संघको असहयोग | Nagarik News - Nepal Republic Media
कांग्रेसका मान्छे हुँदा चिकित्सक संघको असहयोग
१४ मंसिर २०७३ ४ मिनेट पाठ
काठमाडौं- अनशनरत डा. केसीले हटाउन माग गरेका त्रिवि उपकुलपति र आइओएम डिन दुवै कांग्रेसनिकट रहेकैले अन्य अनशनमा साथ दिँदै आएको नेपाल चिकित्सक संघ यसपटक पछि हटेको छ।
डा. केसीले बर्खास्तगीको माग राखेका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र आइओएम डिन डा. केपी सिंह दुवै कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका हुन्। विश्वविद्यालयको भागबन्डा र त्रिविअन्तर्गत संस्थानहरुको भागबन्डामा दुवै ठूला संस्था कांग्रेसको भागमा परेको थियो। चिकित्सकको साझा संस्था भनिए पनि संघमा स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक समूहले निर्वाचन जित्दै आएको छ।
त्रिविमा उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन र आइओएममै डिन डा. शशी शर्मा एमाले कोटामा नियुक्त हुँदा पाँचौं दिनदेखि नै आन्दोलन थालेको संघले युवा चिकित्सकले कडा कार्यक्रम ल्याउन माग राखे पनि अहिले मौन छ।
युवा चिकित्सकका विभिन्न संस्था आन्दोलनमा जान दबाब दिए पनि संघ नेतृत्वले आलटाल गर्दै आएको छ।
शिक्षामन्त्री पौडेल खनियाँको र खनियाँले सिंहको बचाउका लागि समेत संघकै हवाला दिँदै आएका छन्।
विभिन्न चरणमा सरकारसँग भएका सम्झौतामा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि संघ यसपटक त्यही माग विपक्षमा देखिएको छ। संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले अहिले संघ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेको बताए। उनले स्पष्ट रुपमा आफूहरु वरिष्ठतममध्येका डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई बनाउनुपर्छ भन्नेमा नरहेको बताए। 'डा. अग्रवाललाई बनाउने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठले सरकार र केसी पक्षबीच भएको वार्तामा समेत आन्दोलनका आँधीबेहरी सिर्जना गर्न केसी समर्थकलाई चुनौती दिएका थिए।
आन्दोलनका कार्यक्रमबारेको प्रश्नमा डा. श्रेष्ठले वार्ता चलिरहेकाले तत्काल यसको कुरा नउठ्ने बताए। उनले डा. केसीकै संस्था आइओएमका चिकित्सक आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएपछि थप्दै जाने बताए। शुक्रबारदेखि नै आइओएममा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले ओपिडीलगायत सेवा छाडिसकेका छन्।
वार्ता र बैठकमा समेत संघ पक्षीय नेतृत्व आइओएममा डा. सिंहको पक्षमा देखिएको छ। केही महिनाअघि भएको निर्वाचनमा डा.केसीको आन्दोलनमा असहयोग गर्ने शर्तमै निजी कलेजहरुको समर्थन लिएर चुनाव जितेको आरोप प्रगतिशील र समावेशी चिकित्सक प्यानलले लगाएको थियो। पछिल्लोपटक नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा आएका सिंहका पक्षमा संघ उभिनुले त्यसको पुष्टि गरेको चिकित्सकको आरोप छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ १०:०६ मंगलबार